Adim-poko - Ny mpanao politika
Adim-poko - Ny mpanao politika no mivoy azy hoy Manandafy
Tsy ny vanim-potoana diavintsika izao intsony no ahitana resaka adim-poko fa tamin'ny taon-jato faha 19 no nahitana izany izay resaka nampizarazaran'ny mpanjanan-tany entina handrombahana fahefana. Koa raha tsy hapetraka haingana ny lalàna ifampifehezan'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana dia tsy hipetraka eto ny fahalalahana na ny demokrasia.
Io no nambaran'ny filohan'ny antoko MFM Manandafy Rakotoniriana omaly tao amin'ny haino aman-jerim-panjakana raha mahita ny fivoizan'ny hafa ny resaka adim-poko eto amin'ny tanàna amin'izao fotoana izao .
Efa mifangaro ny vahoaka malagasy rehetra noho ny fisian'ny fifanankalozana eran'ny Madagasikara ka samy mitady ravin'ahitra manerana ny toerana heverina fa mahasoa azy ny malagasy, midika fa fanjakana iray ny malagasy ka tsy hisy aharava izany, ny mpanao politika no tena mivoy azy io ankehitriny ary io fotsiny no hataony lahasa amin'izao vanim-potoana izao.
Ny mampatahotra amin'ny mety hisian'ny fifandonana dia ny fitrandrahana ity harena an-kibon'ny tany toy ny any Ilakaka sy ny faritry Bemolanga.
Ny antony dia mitobaka ny fampiasam-bola momba io harena io, ary iza no tsy mahalala fa mahery setra ireny olona ireny, ka eo ny mpanao politika marivo salosana no miditra, ka eo no mety hisy ady raha hisy. Izay no ilàna ilay lalàna ifampifehezana araka ny voalaza etsy aloha mba ho tombontsoan'ny malagasy rehetra ka hifampitsarana rahampitso.
Ny momba ny resaka teteza-mita kosa indray dia nilaza ingahy Manandafy fa hadisoana io, satria tsy hisy Governemanta hijoro eo raha lavin'ny loholona sy ny depiote, koa inona no tsy hanaovany izany raha mihevitra izy ireo fa ilaina ?
Ireo no ampahan-dresaka nataon'ity mpanolon-tsainan'ny filohan'ny repoblika ity sady filohan'ny antoko MFM omaly momba ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao.
- Naivo kely